पोखराको हेम्जादेखि नयाँपुलसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै, ४० किमि बाटो १० किमि ! - Gandak News
पोखराको हेम्जादेखि नयाँपुलसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै, ४० किमि बाटो १० किमि !
गण्डकन्यूज द्वारा २९ आश्विन २०७६, बुधबार १७:११ मा प्रकाशित 0
पोखरा । सरकारले सडक सञ्जाललाई सुरक्षित, छोटो छरितो बनाउन यो वर्ष १३ वटा सुरुङमार्ग अन्डरपासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । तीमध्ये ८ सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ भने ५ वटाको बाँकी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा १२ सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
तीमध्ये पोखरा–बागलुङ सडकखण्डमा पर्ने नयाँपुल–हेम्जा सुरुङमार्ग पनि प्राथमिकतामा परेपछि गण्डकी-धवलागिरि क्षेत्रका बासिन्दा उत्साहित बनेका छन्। दूरीका हिसाबले पर्वतको कुश्मादेखि पोखरासम्म ५८ किलोमिटर रहेको छ। यसअघि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ दोविल्लादेखि पोखराको पामेसम्म सुरुङमार्गले जोड्न प्रस्ताव गरिएको थियो। अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न थालिएको नयाँपुल–हेम्जाको दूरी झण्डै ४० किलोमिटर रहेको छ। तर, सुरुङमार्ग निर्माणपछि आठदेखि १० किलोमिटरको दूरीमा जोडिने अनुमान गरिएको छ।
प्रस्तावित १३ सुरुङमार्ग यी हुन् ।
१ हेम्जा–नयाँपुल (पोखरा–बागलुङ सडक)
२ टोखा–छहरे–गुर्जे भन्ज्याङ
४ खुर्कोट–चियावारी (सिन्धुली)
५ कैलाली खुटिया–बीपीनगर–दियायल खण्ड
७ गोदावरी (ललितपुर)–मानेचौर (काभ्रे)
८ नयाँ बनेश्वरमा अन्डरपास
११ दोलखाको लामाबजर
१२ बुटबल–नारायणगढको दाउन्ने खण्ड
१३ बेत्रावती–घट्टेखोला (स्याफ्रुबेसी)